Nanomboka ny Global Voices amin’ny teny Persiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2018 7:08 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Deutsch, বাংলা, Français, 繁體中文, 简体中文, Español, 日本語, English
Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ihany ny Global Voices amin'ny teny Persiana. Tamin'ny volana Jona 2007 no nanombohany ny fandikanteny voalohany ary efa nanomboka nivoaka tao amin'ny tranonkala vitsivitsy ireo fandikan-teny sasany, anisan'izany ilay iray malaza, Gooya.com ary Digg,Balatarin Iraniana .
Namoaka lahatsoratra momba anay ny vohikala vaovao iray tao Iran, Fararu, nilaza hoe: “Ny Global Voices, izay heverina ho fitaovana goavana ho an'ny bilaogy dia nanomboka ny fandikan-teny vao haingana amin'ny fiteny Persiana.”
Rehefa nandre aho fa misy amin'ny teny Shinoa ny GV dia nihevitra aho fa vaovao lehibe izany saingy tsy nino aho hoe mety ve izany ho an'ny Iraniana . Soa ihany fa toa diso hevitra aho.
Misaotra an'i Alice Backer , mpitarika ny ekipa GV Lingua aho, noho ny fikarakarany sy ny fisahiranany sy i David Sasaki, talen'ny Fanentanana, izay nandrisika ahy hanomboka ny Global Voices amin'ny teny Persiana.